Ruushka oo Sheegay in uu Gubi doono Mandiqadda Bariga dhexe Haddii Mareykanka uu Awood Melleteri u adeegsato arrinta Suuriya.
Sunday October 02, 2016 - 21:05:24 in Wararka by Super Admin
Dowladda Ruushka ayaa ku hanjbtay in ay bixin doonto Jawaab gil-gisha guud ahaan Mandiqadda bariga dhexe haddii uu Mareykanku isku dayo inuu awood ku maquuniyo Nidaamka Nuseyriga ee dalka Suuriya.
Maariya Zaakharof waxay tilmaantay in isbadal walba oo ku yimaada Maamulka dalka Suuriya inuu keeni karo firaaq siyaasadeed oo sababi kara inay buuxiyaan waxa ay ku tilmaantay Kooxaha Argagixisada. Hadalka kasoo yeeray Haweeneyda Afhayeenka u ah Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka waxa uu ka dambeeyay kadib markii Xukuumadaha Washitong iyo Moscow ay is dhaafsadeen eedeemo kulul oo la xiriira cidda ka dambeysa inay bur burto xabad joojintii labada dhinac ay gaareen bishii lasoo dhaafay, kaasi oo la filayay in laga hirgeliyo magaalada Xalab ee Waqooyiga Suuriya.
Wargeyska New York Times ayaa maalintii shalay baahiyay cod sir ah oo laga duubay Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Jhon Kerry, kaas oo ku sheegay in falalka u aaba yeelid la’aanta ee ku dhaqaaqayo Nidaamka Bashaar Al-Asad inay Xukuumadda Washintong ku riixeyso inay qaado tallaabooyin kale, inkastoo Wasiirku uusan si faah faahin ka bixin nooca ay noqon doonaan tallaabooyinkaas dheeraadka ah ee ay qaadayaan.